♥Indawo eyonwabileyo♥ (Yitya-uFundo-Sebenza-Relax-Lala) - I-Airbnb
♥Indawo eyonwabileyo♥ (Yitya-uFundo-Sebenza-Relax-Lala)
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguHappy
♥Indawo yolonwabo♥ Ikhaya lakho kude nekhaya kunye nesidlo sakusasa esilula sasimahla. Le yunithi iqaqambileyo, esandula kwakhiwa yedolophu ye-condo isisiseko esifanelekileyo sokuphonononga isiXeko soBuhlobo beGolden, unonxibelelwano lwabantu ngokubambana nemidlalo yebhodi, ubusuku bhanyabhanya, kunye nendawo yokufunda/yokusebenzela. Ifakwe kwindawo ekhuselekileyo, le ndawo yokuhlala yangoku ineempawu ezikwenza uzive usekhaya njengebhedi ekhululekileyo yobukhulu benkosi, iyunithi ye-AC, iTV, ifriji, ikhitshi elindilisekileyo, itafile, i-WiFi ehlawulelwa kwangaphambili, kunye ne-bidet.
I-24 sq.m. indawo ikwisakhiwo esitsha esinemigangatho emi-4 kumbindi wedolophu iCdeO. Indawo ikumgama wokuhamba ukuya kumakhonkco okutya okukhawulezayo njengeChowking, iJollibee, kunye neMcdonalds kunye nokukhwela imizuzu embalwa ukuya ezibhedlele, icawa yamaKhatholika, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezithengisa izinto ezilula kunye nezokhenketho ezinje ngeelwandle ezisixhenxe kunye neelwandle zoluntu. Zonke iimpahla kunye nezixhobo zombane ezifana neyunithi yomoya, i-smart TV, ifriji encinci, i-rice cooker, i-induction cooker, i-oven microwave, i-smart water dispenser, i-king kunye nebhedi epheleleyo, indawo yokufundela ekhethiweyo, isitulo esimile njengeqanda, i-hair blower, i-iron, ikhitshi elindilisekileyo elinee-condiments zasimahla ezifana nesosi yesoya kunye neviniga, itafile, itafile yokutyela esongelwayo, i-Globe ye-WiFi ehlawulwa ngaphambili, iilinen kunye neetawuli, i-bidet, zonke ezibonelelwe ngaphakathi kwigumbi. Ukongeza, ivenkile yokunyaniseka iyafumaneka kuyo nayiphi na iminqweno yasezinzulwini zobusuku yeendwendwe.
Iibhedi: Njengenye yezona zinto zibalulekileyo xa umntu esekhefini okanye nakweliphi na ikhaya kukuba abe nokulala okusemgangathweni, sibonelela ngebhedi yobukhulu benkosi ye-premium kunye neelinen ezilungileyo zokuthuthuzela kunye nokuphumla kobuhle.
● Qaphela: Ubuninzi bomthamo webhedi yabantu aba-4
Uqhagamshelwano: I-Wi-fi ibonelelwe kodwa isignali inokwahluka ngokuxhomekeke kwinani lezixhobo eziqhagamshelweyo. Kwakhona, isignali yethu ye-wi-fi ayisiyiyo yomelele emhlabeni kodwa ihloniphekile.
Ukwenzela iindwendwe, incwadi yesikhokelo ibonelelwe ngeendawo ezicetyisiweyo zokundwendwela esixekweni kunye nezinto ekufuneka zenziwe.
Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe. Kwimeko yemibuzo okanye ukuba undwendwe ludinga okuthile, inombolo ephathwayo yomninimzi ifumaneka kwincwadi yesikhokelo.
Sizibophelele kwinkqubo yokucoca ephuculweyo ye-airbnb kwaye indawo iyacocwa phambi nasemva kokusetyenziswa. Indawo yokuhlamba iinyawo kunye nezibulali ntsholongwane ezifana notywala nazo zikwakhona.
Iincwadi zabantwana nezinto zokudlala zabo baneminyaka eyi-Abaneminyaka engu-0 ukuya kweyi-2
Inombolo yeselula inikezelwa xa udibene nazo naziphi na iingxaki okanye unemibuzo. Nangona kunjalo, njengoko ndingahlali kule ndawo, ndicela undinike ixesha elaneleyo lokulungiselela ukuza kuwe xa unokundidinga ngokwasemzimbeni. Ndifumaneka ngo-8:00am ukuya ku-8:00pm. Enkosi.
Inombolo yeselula inikezelwa xa udibene nazo naziphi na iingxaki okanye unemibuzo. Nangona kunjalo, njengoko ndingahlali kule ndawo, ndicela undinike ixesha elaneleyo lokulungisele…